UKUHLALA KWELANGA 1 IMIBUKO EGCWELE EGULF - I-Airbnb
UKUHLALA KWELANGA 1 IMIBUKO EGCWELE EGULF
Bradenton Beach , Florida, i-United States
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Love Rentals
Igumbi lokulala eli-2, i-townhouse yokugezela engu-2.5 e-Bradenton Beach enokubukwa kwe-Gulf kanye ne-Intercoastal.
Iphothifoliyo ye-LoveRentals iqukethe amakhaya aqashwayo akhethiwe, aphethwe ngobungcweti emhlabeni jikelele. Sikhetha kuphela abaphathi bezakhiwo abangochwepheshe abahlangabezana nezindinganiso zethu eziphakeme. Bhuka ngokuthula kwengqondo wazi ukuthi uzoba neholide elihle kakhulu.
LoveRentals - Thola Injabulo Yakho.
Igumbi lokulala elihle elingu-2, igumbi lokugezela elingu-2.5 leli qembu litholakala olwandle oluhle lwaseBradenton olunokubukwa okuhle kolwandle.
Ifakwe ifenisha enetimu ye-Tommy Bahama, le yunithi inamavulandi amaningi anikeza umbono omuhle weGulf of Mexico. Ikhishi lisebenza ngokugcwele nazo zonke izinto ezidingekayo ukuze kulungiswe ukudla. Kukhona imicrowave, isiqandisi, isitofu, nomshini wokuwasha izitsha. Eduze nekhishi kunetafula nezihlalo ezine. Indawo yegumbi lokuphumula inezihlalo ezikhululekile kanye nemibono yolwandle. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nenkosi, igumbi lokugezela langasese, kanye nokufinyelela okuqondile kuvulandi. Igumbi lokulala lesibili linombhede wendlovukazi wesitayela sika-Murphy.
Amabhishi amahle anesihlabathi esimhlophe ahamba ibangana nje. Kukhona amathoyizi, izihlalo zasolwandle, namathawula anikeziwe.
Le yunithi isendaweni enhle ngaphakathi kwebanga elifushane lokuhamba lezitolo nezindawo zokudlela nokunye okuningi. Kunomculo obukhoma kanye nezindawo zokudlela ezinhle zasendaweni. Kuwuhambo olufushane nje ukusuka kuBridge Street ongumlando. Izivakashi zingasebenzisa isevisi yetroli yesiqhingi futhi zihlole i-Holmes Beach kanye neDolobha lase-Anna Maria futhi. Akukho ukushoda kokuzijabulisa nokuzidela.
- Inqubomgomo Yezilwane Ezifuywayo: Le ndawo ilungele izinja. Uma uzoletha inja yakho, sicela uxhumane nathi ukuze uthole imikhawulo yohlobo/yesisindo. Sicela uqaphele: Izimali zezinja Ezingabuyiswa ziyasebenza - kuvunyelwe izinja ezi-2. Sicela uqaphele: ngaphandle kolwazi lwangaphambili ekuqashisweni kothando kuzoba khona ubuncane be-$500 Engabuyiswa kanye nokukhishwa okungaba khona ngakho sicela uqinisekise ukuthi uyasicebisa NGAPHAMBI kokuthi uhambe. Umnikazi wezinja wamukela umthwalo wemfanelo ogcwele wenja. Izinhlobo ezinolaka AYIVUMELEKILE.
FUNDA NGAPHAMBI KOKUBKHA
Lapho ubhukha, uzothola isicelo esihlukile ngesikhungo sokuxazulula se-Airbnb seNtela Yokuthuthukiswa Kwezivakashi. Isifunda saseManatee sidinga ukuthi siqoqe intela yerenti kukho konke ukubhukha. Lesi sici asisekelwa okwamanje ku-Airbnb. Amaphesenti entela ahambisana nokuhlala kwakho azoba ngu-5%
Sicela uqaphele, imininingwane yokungena ngeke ithunyelwe kuze kube yilapho izintela eziyisibopho sezikhokhwe ngokugcwele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bradenton Beach namaphethelo